NOOCYO IYO ASTAAMAHA DHALIDA EE CLEMATIS - BEERTA
Clematis Sifeynta Sifooyinka
Clematis - Tani waa mid ka mid ah dalagyada beerta ugu caansan.
Qaar badan oo ka mid ah jannooyinka adduunka ayaa isku dayaya inay keenaan noocyo cusub, sababtoo ah warshadani ennobles xitaa naqshadeynta muuqaalka nasiib darrada ah, qof kasta oo agagaarka wakhtiga ubaxyada u soo jiidanaya.
Suuqa wuxuu bixiyaa noocyo clematis waa mid aad u ballaaran, laakiin qiimaha waa sare. Inta badan, haddii aad hesho clematis varietal, ka dibna waxaad rajaynaysaa in ay ku dhufan.
Laakiin laguma talinayo in tan la sameeyo iyadoo la adeegsanayo abuurka, tan iyo tayada geedka lumay, sidaa daraadeed habkani waa mid aan la isticmaalin.
Wixii beerista iyo dhalashada ee barbar socda, waa inaad tixgelisaa baahida dhaqankan xaaladaha deegaanka. Dhirta Tani waxay jecel yihiin meelaha qorraxda, iyada oo aan la qorin.
Xayawaanka waa loamy wanaagsan, yar yar alkaliin ama dhexdhexaad ah, bacrin ah, si fiican loo bacrimiyo iyo dabacsan. Clematis, carrada acidic ma aha mid ku habboon. Waa in sidoo kale maskaxda lagu hayaa in clamatada boogaha dabiiciga ah ee dabiiciga ah.
Saddex kooxood oo caleen ah ayaa lagu sharaxay boggayaga internetka.
Halkan u akhri sidaad u taageeri lahayd clematis gacmahaaga.
Fiiri sawirrada noocyada clematis: //rusfermer.net/sad/tsvetochnyj-sad/klematis/sorta.html
Clematis dhalmo by gooyn
Habka ugu dhaqsiyaha badan ee lagu dhalo caleemo cusub. Waxaa lagama maarmaan ah in la sii wado barxadeynta ka hor ubax, tan iyo guntooda ka soo dhirta ubax qaadan xididka ka sii daraya.
Laakiin waqti isku mid ah ma noqon doonto wax xun in la haysto waqti guntin laga soo gooyo warshad leh burooyinkeeda, sababta oo ah biostimulants dabiici ah ayaa aad u firfircoon.
Waxaa la samayn karaa goor dambe iyadoo la jarayo, laakiin waxay noqon doontaa wax yar oo waxtar leh maxaa yeelay dhirta ayaa xididada ka sii dari doonta.
Gooyn ayaa ugu wanaagsan in la gooyo subaxdii, tani waxay ka caawinaysaa in dhirta laga ilaaliyo fuuqbaxa. Waxaa fiican in tani dhacdo cimilada daruuraha leh, saacadaha dambe ee habeenkii waa kuwo wanaagsan. Laguma talinayo in si dhakhso ah looga gooyo caleemo badan oo baadiyaha ah. Waa in aan ka badneyn saddex meelood hal mar markiiba.
Qaybta dhexe ee caleemaha ayaa ku habboon ujinta, maadaama qaybta sare aysan caadi ahaan lahayn burooyinkeeda, qaybta hoose waa mid aad u adag isla markaana qaadataa xidid sababtoo ah si liidata. Gooynka ugu fiican ee xidid leh hal meel.
Si loo dedejiyo gooynta waxaa lagu daaweeyaa xal loogu talagalay biostimulation of growth (xididka iyo kuwa kale).
Sida meel loo aaso, waxaad isticmaali kartaa koriyo, aqalka dhirta lagu koriyo ama dheri leh isku dar ah peat iyo ciid.
Geedka xididdada ka fiican marka la iftiimiyo iftiinka, sidaas daraadeed waxa fiican in la isticmaalo filin gaar ah oo ka ilaaliya dhirta ka soo kulul, laakiin ma abuurayo qadar badan oo kondensi ah.
Waxaad u baahan tahay inaad ku degto meel fog oo ah shan sentimitir iyo fogaan ah toban sintimitir inta u dhaxaysa safka. Xoojinta jirida 1-2 cm si aad u ilaaliso kelyaha abaarta.
Xaaladda ugu weyn ee hufnaanta guulaysatay waa qoyaan ciid ah oo qoyan iyo qoyaan hawada sare leh. Waxaa lagugula talinayaa inaad si joogto ah u buufiso dhirta si looga hortago qalajinta.
Waraabinta waxay u baahan tahay maalin kasta, iyo bil kadib, waxaad yareyn kartaa waraabinta ilaa 2 jeer toddobaadkii. Rooted ilaa 50 maalmood.
Ilaa iyo xilliga guga waxaan ka baxnaa aqalka dhirta lagu koriyo, oo daboolo jiilaalka dabaysha kuleylka ah ee balka, guga waxaan ku beeri karnaa sariiraha diyaarka ah si geedka cagaarku u koro qiyaasta loo baahan yahay, iyo dayrta waxaan ku wareejineynaa geedka meesha ay si joogto ah u korayaan. Qiyaas ahaan 60 boqolkiiba dhammaan clematis beeray beeray.
Waxa kale oo aad isku dayi kartaa inaad isticmaasho habka gooyn guga, waayo, taas oo kudhowaad bartamaha May ee caleemaha waxaa lagu beeray hooska, qanjirta dushooda iyo daboolo baakadaha dhalada ah. By dayrta, guntooda hore u leeyihiin nidaam xidid wanaagsan.
Akhri faahfaahinta beeraha iyo daryeelka clematis.
Sida loo sameeyo xakamaynta gacmahaaga, baro adigoo gujinaya bogga: //rusfermer.net/postrojki/sadovye-postrojki/dekorativnye-sooruzheniya/delaem-ogorodnoe-chuchelo-svoimi-rukami.html
Waa wax fudud in la koro warshad ka soo gooyn, laakiin waxay qaadanaysaa muddo dheer.
Waxaa jira dhawr fursadood oo lagu heli karo layers:
1. Kareemaha bacriminta ilaa 2 ilaa 3 caleemo. Waxaa lagama maarmaan ah in laga saaro dayrta ciidda, sidaas darteed waa caado ah in la isticmaalo dhululubada gaarka ah.
Ka dib qiyaastii sannad ama laba, dhirta waxay horumarinaysaa xidid kale, iyadoo la adeegsanayo caleemaha la kala saari karo laguna beeray meelo kale, iyagoo jaraya dusha sare ee wareegga labaad.
2. Habka ugu fudud ee la yiraahdo waxaa loo yaqaana layashyo toosan. Waxaa ugu wanaagsan in la sameeyo xilliga dayrta ama guga goor dambe. Ku dhow saldhigga baadiyaha u samee jeexdin leh dherer laba mitir iyo qoto dheer oo ku saabsan 8 sentimitir.
Kacsiga ayaa lagama maarmaan u ah in la dhigo, iyadoo hubinaysa in korka leh cayayaanka la soo saaray ay ku yaalaan dusha sare. Haddii kale, clematis ma baabbi'in doonaa.
Lakabka noocan oo kale ah wuxuu u baahan yahay waraabin fara badan oo ciidda si fiican u daadisa. Caleemaha xididada waxaa la kala soocaa xilliga dayrta ama xilliga xiga ee soo socda, way ka nadiifsan yihiin dhulka, waxay u kala baxaan duurka shakhsi ahaaneed iyo dib loo siiyaa meel joogto ah oo koritaan ah.
Haddii xididka aan la horumarin, ka dibna waxaa lagula talinayaa inuu sii koro ka hor inta aan la beeri.
Hab wanaagsan oo lagu soo saari karo labadaba caleemaha iyo clematis - Beelaha. Waxaa loo isticmaalaa 5-6 sano ka dib dhirta sii kordhaysa.
Bilow inaad kala qaybiso dhirta bil ka hor baraf ama guga ka hor bilawga ah ee gaysashada. Waxaa haboon in la xusuusto in dhirta loo qaybiyey habkan si habboon u qaadan xidid si aad u wanaagsan, sidaas darteed waxaad u baahan tahay inaad bacrimiya geedka waqti ee muddo sannad ah si ay xididdada dhalinyaro cusub foomka caleemaha.
Si taxaddar leh u qodo baadiyaha iyada oo aan waxyeellaynin xididada, ruxin dhul xad-dhaaf ah oo u kala qaybi dhinacyo badan. Fadlan ogow in qayb kasta ay leedahay kelyo iyo nidaam xidid wanaagsan. Isticmaal mindi haddii loo baahdo.
Marka baadiyaha hore ay adagtahay in si buuxda loo qodo, waxaad u baahan tahay inaad xoqdo xididada mid ka mid ah dhinacyadeeda iyo waxoogaa yar oo jarjar ah qayb ka mid ah xasiloonida. In dib-u-soo-noqoshada, waxaanu buuxinaynaa dhul cusub oo miro leh. Sanadka soo socda waxaan ku soo celineynaa dhammaan arrimahan, laakiin dhinaca kale ee baadiyaha.
Sidaa darteed, waxaad heli kartaa ilaa shan dhirta oo ku farxi doona ubax horey u ahaa sanadka kowaad.
Sharaxaad canab ah ugu wanaagsan, ka hel bogga.
Noocyada canab miiska: //rusfermer.net/sad/vinogradnik/sorta-vinograda/stolovye-sorta-guograda.html
Faafinta by abuurka waxaa sida caadiga ah loo isticmaalo for taranta noocyo cusub. Dhirta kala duwan ee dhirta ah ayaa dhif ah in la hayo sifooyinkooda, taas oo qayb ahaan wanaagsan)
Noocyo way kala duwan yihiin: qiyaas ahaan 6 ilaa 8 mm, waxay ku dhalan karaan 5 sano gudahood. Kuwaas waxaa ka mid ah clematis leh ubax yaryar iyo qaar ka mid ah kuwa waaweyn oo ubax leh.
Wixii clematis leh abuurka yar yar oo leh dhexroor ah 3 illaa 5 mm waxaa ka mid ah lix-jebiyey iyo noocyo kale.
Waxay ku jiri karaan muddo 3 sano ah. Kooxda saddexaad waxaa ku jira miraha aad u yaryar, waxay si fiican u soo baxaan, laakiin ma joogsadaan meel lagu kaydiyo.
Waqtiga ugu wanaagsan ee lagu beerayo waa guga. Seeds waxay u baahan yihiin in lagu beeray dhul furan ama dheriyo. Ka dib muuqaalka caleen ugu horeysay, dhirta u baahan tahay in lagu dhex beeray meel cidlo ah. Sannadka soo socda waxaan ku beeri clematis meel joogto ah.
Hab kasta oo dhalmo ah ee dhirta quruxda badan ee aad dooranayso, waxaannu kuu rajaynaynaa guul! Waxaa laga yaabaa inaad awood u leedahay in aad soo qaadato noocyo cusub oo goobtaada kuugu farxi doonto ubaxyo qurxoon.